Home Wararka Ciyaaraha Maanta Douglas Costa oo Jecel inuu ku laabto horyaalka Talyaaniga.
Xiddiga garabka ka ciyaara ee kooxda Bayern Munich Douglas Costa ayaa doonaya inuu ku laabto Italy isagoo ku dhibtooday inuu si joogto ah u ciyaaro intii uu socday ololaha macalinka Hansi Flick.
Xiddiga reer Brazil, oo amaah ku jooga kooxda Juventus ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka, ayaa u sheegay weriyaha reer Talyaani Pierluigi Pardo: “Waxaan jeclaan lahaa inaan ku laabto Talyaaniga, oo ah waddan aan aad ugu mahadnaqo.
Mar la weydiiye inuu jecelyahay inuu baaqi kusii ahaado talyaaniga waxa uu yiri Aynu aragno waxa dhaca Weli qandaraas ayaan kula jiraa Juve.
Previous articleHalyeeyga Benfica Nuno Gomes oo Raba in Devid Liuz uu Kooxda kusoo laabto.
Next articleQaar kamid ah madaxda kooxda inter milan oo laga baaray Covid19.